I-Introduction of Shock Sub Drilling
ngomphathi ku 19-03-27
Le Nkqutyana shoka yokomba iqulunqwa ekwahluleni umtya drill evela deflections yezihlunu badalwa bit ngemisebenzi zokumba yaye uze ukukhusela bit ukususela sicinywa kakhulu kwi ngokusebenzisa umsebenzi wokugrumba. Esi sixhobo siza ukufunxa esinzima ejikeleza umtya drill kunye drill bit. Oku kuquka a h ...
bathezi-i-hydraulic izixhobo ezininzi ezikhoyo kwi market
Njengokuba kuye kwafika kubo bonke, lo mgawuli lwangaphakathi ngoomatshini esisetyenziselwa liqatywe kwezi iinxalenye ezithile ngaphezu umbhobho downhole ntshunxekile, ezifana Umtya kubuxhakaxhaka bokuvelisa, drill kwikholam njalo njalo. Nje kakuhle, ukuba wamkelwe nangokukrola kwangethuba bag zokulala yokugaya istili of istili yokwakha, nge ...
Imidlalo ezibalaseleyo Cordless uqheliso
Enye injongo ngokuqhelekileyo uqheliso Ubusoloko zenkcenkce, ngokhuni, ukuphuhlisa kunye imisebenzi DIY. Uya kufumana uqheliso kwenziwa ngakumbi ukuze zisetyenziswe amayeza, ukuhlolwa kunye wokombiwa kwedayimani. Uya kufumana uqheliso ezinkulu uqheliso ezincinane kananjalo ngokoqobo infinites ...
World Oil Iimbalasane Demand (13 Novemba 2015) * Nceda uqaphele ukuba ezi Iimbalasane zivela iNgxelo zakutshanje Oil Market, ephuma ngokupheleleyo kubabhalisi kuphela - ngokwale shedyuli nyanga nganye. ababhalisayo Non ukufumana ukufikelela simahla leeMbalasane yakutshanje kule shedyuli, kodwa ...
Energy drill izixhobo
Ngokufuthi fambisiwaka yi ngesandla okanye ngamandla ombane. Kuyenzeka ukuba angasebenzisa eli matshini njenge screwdriver. Kufuneka ukulungisa nje incam screwdriver kulo matshini ukusebenzisa njengoko screwdriver. Oomatshini ukubhola ayafumaneka iintlobo ezahlukileyo ezisekelwe phezu imfuneko yalo. Neentlobo ngeentlobo ...
Ukujikeleziswa Reverse (RC) Drilling
ejikeleza Reverse (RC) yokomba isebenzisa drill umbhobho osebenza kubini-enqatyisiweyo (intonga) kunye sokugrumba esiqinileyo ukuze avelise umngxuma ukuma ukhulula chips iliwa (izithole) kumphezulu ukuba uhlalutyo elandelayo. Isixhobo sokugrumba i Buyisela piston womoya (isando) uqhuba i d Tungsten-steel ...
reamers mqengqeleki abaqeshwe imisebenzi uyadika kwishishini oyile negesi. Umsebenzi omkhulu reamers mqengqeleki kunqunyulwa iimanyano emhlabeni ukuze bandise umngxuma ukuya ubungakanani enqwenelekayo ngexesha lomsebenzi wokugrumba kakuhle, nto leyo isenokuba ubungakanani lokuqala sokugrumba kwimeko apho drill bit w ...
Motors lodaka Downhole
Motors lodaka Downhole Kukho iindidi ezimbini eziphambili iinjini downhole zixhaswe flow zodaka; 1) I-injini, into leyo ethe nempompo centrifugal okanye yezihlunu kunye 2) Le motor ukubana udaka HIV (PDM). Imigaqo yokusebenza ziboniswe kuMfanekiso kunye noyilo zesixhobo zahluke ngokupheleleyo. ...
Two-Way Shock Sub, Bumper Sub Fishing Isixhobo In Drilling, Yothuse yokugrumba Tool Sub, Reverse Circulation Junk Basket, Iingqayi Fishing, Fishing Tools,